भगवान शिवले बाघको छाला धारण गर्नुको रहस्य के होला ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/भगवान शिवले बाघको छाला धारण गर्नुको रहस्य के होला ??
भगवान शिवले बाघको छाला धारण गर्नुको रहस्य के होला ??
अर्थ- रूद्र नै ब्रह्मा, विष्णु हुन् सबै देवता रुद्रांश हुन् र सबैकुरो रुद्रबाटै उत्पन्न भएका हुन् । रुद्र नै ब्रह्म स्वरुप हुन् र उनी नै स्वयम्भू हुन् । अर्थात शिव नै ब्रह्मा हुन् ,ब्रह्मा नै शिव हुन् ,शिवनै बिष्णु हुन् अनि बिष्णु नै शिव हुन् । यस संसारको श्रृष्टि, पालन र संहारका विभिन्न नामले उनी चिनिदै आएका छन् ।
शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार भगवान शिवका अनेक नाम छन् । शिव, शंकर, भोलेनाथ, महादेव आदि । भगवान शिवका अनेक नाम भए पनि बाघको छालाको वस्त्र धारण गरे भन्ने विषयमा सवैलाई थाहा नहुन सक्छ ।भगवान शिव सधैँ बाघको छालामा सजिएका हुन्छन् । उनले गहना स्वरुप नागको माला पहिरिन्छन् । हातमा त्रिशुल लिएका उनको शिरमा चन्द्रमा र गंगा हुन्छन् ।धर्मग्रन्थहरुमा भगवान शिवको जुन स्वरुपको वर्णन गरिएको छ त्यो निकै आश्चर्यजनक छ । उनले बाघको छालाको वस्त्र धारण गर्नुको कारणबारे शिवपुराणमा उल्लेख छ ।
पौराणिक कथालाई आधार मान्ने हो भने भगवान शिव एक पटक ब्रह्माण्डको भ्रमणका क्रममा एक जंगलमा पुगे । जहाँ ऋषि मुनिको बासस्थान थियो, ऋषिमुनि परिवारसँग बस्थे ।यो जंगलमा भगवान शिव निर्वस्त्र घुम्थे । शिवजी यो कुराबारे जानकार थिएनन् कि उनले बस्त्र पहिरिएका छैनन् । भगवान शिवको आकर्षक शरीर देखेर ऋषिमुनिका पत्नीहरु भगवान शिवप्रति आकर्षित भए ।सबै काम छोडेर ऋषि पत्नीहरु शिवजीको पछि लाग्न थालेपछि ऋषिहरु तनावमा परे र उनीहरु शिवसँग क्रोधित भए । तर उनीहरुले निवस्त्र हिड्ने भगवान शिव हुन् भन्ने चिनेनन् । त्यसपछि ऋषिहरुले निर्वस्त्र व्यक्तिलाई सजाय दिने उपाय खोज्न थाले ।
ऋषिहरुले वनमा एउटा ठूलो खाल्डो खनेर शिवजीका लागि पासो थापे । उक्त पासोमा शिवजी परे । त्यो गहिरो खाल्डोमा ऋषिहरुले एउटा बाघ पनि हालिदिए ताकि त्यसले ति निर्वस्त्र व्यक्ति (शिवजी)लाई खाओस् ।तर त्यस्तो भएन । खाल्टोबाट ति निर्वस्त्र व्यक्ति बाघको छाला बेरेर निस्किए । बाघलाई मारेर शिवजीले छाला धारण गरे । त्यसपछि मात्र ऋषिहरुले ति समान्य व्यक्ति नभएको थाहा पाए । त्यसदिनदेखि भगवान शिवजीले बाघको छाला लगाउने वा त्यसमाथि बस्ने गरेको शिव पुराणमा उल्लेख छ ।
भग-वान शिवको उपा-सना गर्दा गर्न नहुने १५ गल्ती
एक मुखे रुद्राक्ष देख्नवित्तिकै ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस्, नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुन्छ !